किन आँखा लगाउँछन् विवाहित महिलालाई ? पुरुषले हेर्नुहोस् यस्तो छ कारण - Samachar Post Dainik
किन आँखा लगाउँछन् विवाहित महिलालाई ? पुरुषले हेर्नुहोस् यस्तो छ कारण
आजभोलि विवाहित महिलामाथि अन्य पुरुषहरूले आँखा लगाउनु साधारण नै भइसकेको छ हामीले यस्तो घटना देख्दै- सुन्दै पनि आइरहेका छौँ आखिर किन पुरुषहरूले आँखा लगाउँछन् त विवाहित महिलालाई जान्नुहोस् कारणयदि कुनै विवाहित महिला आफ्नो सबै काम सही ढंगमा गर्छिन् र सधैँ अनुहारमा मिठो मुस्कानका
साथ बोल्छिन् भने यस्ता बानीले पुरुषलाई आकर्षण गर्ने गर्दछ।विवाहित महिलाले आफ्नो पार्टनरका साथै सम्पूर्ण परिवारको कियरिङ गर्दछन् ।
काठमाडौँ । अन्य समयमा भन्दा जाडोमा टन्सिलको जोखिम बढी हुनेगरेको पाइएको छ । गलामा टन्सिल हुने समस्या पछिल्लो समय धेरै मानिसको साझा समस्या बनिरहेको छ । टन्सिल हुँदा गलाको दुवैतर्फ मासुमा गाँठो बन्नेगर्छ । गला सुन्निने हुँदा बेस्सरी दुख्ने अनि बोल्नमा समस्या पैदा हुन्छ । खानाको स्वाद पनि लिन सकिदैन ।संक्रमण, ब्याक्टेरिया, गलत खानपान र मौसम परिवर्तन टन्सिलका मुख्य कारक हुन् । कब्जियतले पनि टन्सिल गराएको पाइन्छ । टन्सिल के कारणले हुन्छ अनि यसको घरेलु उपचार बिधि के हो त ? यसबारे जानौँटन्सिलको कारणस् आयोडिनको कमी, मौसम परिवर्तन, चिसो खानेकुरा, गलत खानपान, संक्रमण वा ब्याक्टेरिया, धूलोधूवाँ, अमिलो खानेकुरा आदीले टन्सिलको जोमिखम बढाउछन् ।टन्सिलको लक्षण: टन्सिलको जोगिम सुरु
भएसँगै शरीरको तापक्रम उच्च हुन्छ, सुक्खा खकार, ज्वरो आएर जिउ काँप्ने, सास गनाउने, गलाको भित्री भाग रातो हुने, आवाज भारी हुने, खाना निल्न गाह्रो हुने आदी भएमा टन्सिल भएको बुझ्नुपर्छ ।टन्सिल गलामा हुने भएकाले स्वासप्रश्वास र खानपानमै समस्या देखिएपनि प्रारम्भिक चरणमै उच्च जोखिम हुदैन । यसलाई यी घरेलु उपचार बिधिबाटै निको बनाउन सकिन्छ ।मरिच र तुलसीको पातस् मरिच र तुलसीको पातलाई उमालेर गाढा घोल बनाउनुस् । राति सुत्नुअघि दूधमा यसलाई हालेर पिउदा निदान मिल्छ । यो क्रमलाई केही दिनसम्म जारी राख्नुपर्छ ।
उमेरका नैहुने गर्दछन्। खासमा पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी महिला खोजेर यस्तो भएको होइन बरु महिलाहरु नै आफू भन्दा पाको उमेरको पुरुषसँग स’म्बन्ध राख्न चाहन्छन्। हालसालै गरिएको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको छ । १-सुरक्षित:केटीहरुले आफू भन्दा पाको उमेरका पुरुष खोज्नुका धेरै कारण छन् । खासमा पाको उमेरका पुरुषसँग उनीहरुलाई सुरक्षित महसुस हुन्छ । पाको उमेरका पुरुषहरु आर्थिकरुपले पनि बलिया हुन्छन्
भन्ने विश्वास हुन्छ । उनीहरुमा जीवनको अनुभव पनि धेरै हुन्छ। पाको उमेरका पुरुषसँग महिलाले सुरक्षित महसुस गर्छन्। तृशना बुढाथोकी आफ़्ना स’म्वेदनशील अं’ग दे’खाउदई फेसबुक लाइभ –भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस👇 तीन वर्ष विदेश बसेर फर्केकी पार्वतीलाई मुकुन्दले कहिल्यै हेला गरेनन् ।
प्रकाशित मिति ४ माघ २०७७, आईतवार ००:०६